Dawlada oo la rafaadsan soo celinta khadka Internet ee Koofurta dalka - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Dawlada oo la rafaadsan soo celinta khadka Internet ee Koofurta dalka
Dawlada Somaliya ayaa sheegtay in welli la raadinayso waxa sababay in la waayo khadka Internet-ka muddo hadda ku siman laba cisho. Waxa si weyn looga dareemay dhamaan gobolada Koofurta dalka iyo bartamaha. Maaha markii ugu horeysay ee khadku go’o.
Sanadii 2017 ayaa sidan oo kale dhacday markii markab jariifa uu goostey xarigii badda marayay ee siinayay internet-ka Koofurta dalka.
”Maadaama badda Somaliya aan cidi ilaalin waxa xanibaado dhigtey badda maraakiib reer Yurub iyo Eeshiya ka yimi oo daldasha kaluunka badda kana sameeya balaayiin doolar ayuu yiri Cali Calasow.
”Xataa dawladu ma haysato khad gooniya, waxayna wax la qabtaa dadka inteeda kale oo hadda isticmaalaya khadka saatalaytka ee qaaliga ah ayuu raaciyay Cali Calasow.
Waa meelaha dawladu ka gaabisay inay wax ka qabato waxaan dareensahay inayna ogeyn in dhaqaalaha casriga uu ku xiran yahay internet ayuu qabaa Xuseen Warsame.
“Waxaa socda baaritaan lagu ogaanayo halka ay ka timid cilada iyo waxa sababay, waxaana loo malaynayaa in caaga ama fiilada badda soo marta ee internetka soo geliya Muqdisho ay ciladu ka timid, marka la ogaado cilada baaxada ay dhan tahay ka dib ayaana loo dhaqaaqi doonaa in la xaliyo, lamana sheegi karo xiliga ay qaadan karto” ayuu yiri wasiirka isgaarsinta Inj. Cabdi Canshuur Xasan.
Xadhiga internetka ee badda hoosteeda waxa inta badan waxyeeli kara maraakiibta waaweyn ee kaluumeysiga iyo dhul gariir. amase in si ula kaca loo jaro. Shirkada iyadu shaqada ku leh ayaa qabta in si ula kaca loo jaray laakiin welli ma hayso faahfaahin buuxda.
Dhinaca shirkada Hormuud ayaa iyadna leh waxa timi cilad badda hoosteeda ah.